မြဝတီယာဉ်မတော်တဆဖြစ်မှုတွင် လုပ်သားများအား အေဂျင်စီနှင့် MOEAFမှ ကူညီပေးနေ – Myanmar Live
မြဝတီယာဉ်မတော်တဆဖြစ်မှုတွင် လုပ်သားများအား အေဂျင်စီနှင့် MOEAFမှ ကူညီပေးနေ
January 10, 2020 - by peeraporn y.
ဇန်န၀ါရီ ၃ ရက်က မြ၀တီ-ကော့ကရိတ် အာရှလမ်းမတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော လူ၁၂ ဦးသေဆုံးခဲ့သည့်ယာဉ်မတော် တဆမှုဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး လိုအပ်သည့် ထောက်ပံ့ကူညီမှုများကို သက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီနှင့် MOEAF မှ ကူညီပေးနေသည်ဟု သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
ထုတ်ပြန်ချက်တွင်မတော်တဆမှု ဖြစ်ပွားလျှင်ဖြစ်ပွားခြင်းထက်မာန်အေဂျင်စီမှတာဝန်ရှိသူများသည် မြဝတီမြို့ရှိ လူမှု ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့များ၊စစ်ဘက်၊နယ်ဘက်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့်အတူ ကူညီကယ်တင်ခြင်းများ ကိုစတင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ယင်းနေ့တွင်ပင်MOEAFမှထိုင်းလုပ်ငန်းကော် မတီ၏အမှုဆောင်တဦးကို မြဝတီမြို့သို့ ချက်ခြင်း စေလွှတ်ခဲ့ပြီးလိုအပ်သောပံ့ပိုးကူညီမှူများကို ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်စေခဲ့သည်။MOEAF မှအမှု‌ဆောင် နှင့် အဖွဲ့သည် မြဝတီနှင့် ဘားအံဆေးရုံကြီးတို့တွင် ဆေးကုသမှုခံယူနေသော အလုပ်သမား ၃၇ဦးတို့အား သွားရောက်တွေ့ဆုံနှစ်သိမ့် အားပေးကူညီခဲ့ပြီး MOEAF ၏ကနဦးထောက်ပံ့ငွေကျပ်၅သောင်းစီကို ပေးအပ်လှူဒါန်းခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရရှိသောအရေးကြီး လူနာများအတွက် ပိုမိုထိရောက်သော ဆေးကုသမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်အတွက်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ အသုတ်လိုက်သယ်ယူပ ဆောင်ပေးပြီး ဆေးကုသမှုများခံယူစေ ခဲ့သည်ဟု ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ထို့အပြင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ MoU စနစ်ဖြင့် သွား‌ရောက်သော အလုပ်သမားများ လုံခြုံမှုရှိစေရေးနှင့်အချိန်မရွေးဖြစ် ပေါ်လာနိုင် သော ဘေးအန္တရာယ်များကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အဖွဲ့ချုပ် MOEAF သည် အလုပ်သမားတိုင်းအတွက် အသက်အာမခံများ၊ကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်မှုအလုံးစုံအာမခံများကို နိုင်ငံပိုင် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းတွင် ထားရှိစေခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ MOEAFသည် ယခုဖြစ်စဉ်တွင် အသက်အာမခံများ၊ကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်မ အာမခံများကို အမြန်ဆုံးရရှိနိုင်‌ရေးအတွက် မြန်မာ့ အာမခံလုပ်ငန်းနှင့်အချိန်နဲ့‌တ‌ပြေးညီချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ သည်။ သေဆုံးသူများအတွက် မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်းမှ တဦးလျှင် ကျပ်သိန်း၅၀ပေးအပ်မည်ဖြစ်သည်။ IKBZကားအာမခံမ လည်းသေဆုံးခဲ့သော လုပ်သားများအား တဦးလျှင်ကျပ်သိန်း၃၀စီ ပေးအပ်ခဲ့သည်။
“မြဝတီမြို့ ယာဉ်မတော်တဆဖြစ်စဉ်မှာ အသက်ဆုံးရှုံးရသူများ၊ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသုများအတွက် အင်မတန်မှ စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။ မိသားစုများနဲ့အတူ ဝမ်းနည်းရပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဒီဖြစ်စဉ်မှာ ကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြတ ဌာနဆိုင်ရာများမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ အလုပ်သမားကူညီစောင့်ရှောက်ရေးနှင့် လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအ ဖွဲ့အစည်းများမှပုဂ္ဂိုလ်များ ၊မြဝတီ၊ဘားအံနှင့်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးတို့မှ
ဆရာဝန်ကြီးများနဲ့ဝန်ထမ်းများ၊လူနာတင်ယာဉ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့များ၊ မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း၊ IKBZနဲ့ တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှု အပြည့်နဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ထက်မာန်အေဂျင်စီနဲ့ MOEAF ထိုင်းကော်မတီဝင်များ၊ အဖက်ဖက်ကပံ့ပိုးကူညီကြတဲ့အပြင် ငွေ‌ ကြေးလှူဒါန်းကြတဲ့ MOEAF အသင်းသူ၊အသင်း သား များကို ‌MOEAFအနေနဲ့ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။”ဟု MOEAF အမှုဆောင်တဦးမှပြောကြားခဲ့ သည်။
Previous Article စပါးနဲ့ လီပါဗူးတို့ ထိပ်တိုက်တွေ့မယ့် ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၂၂ ပွဲကြိုသုံးသပ်ချက်
Next Article မြန်မာနိုင်ငံသား ၃ ဦးစီးနှင်းလာသည့်ဆိုင်ကယ်တစ်စင်း အရှိန်မထိန်းနိုင်ပဲ ဓာတ်တိုင်ကိုဝင်တိုက်မိပြီး ပွဲချင်းပြီးသေဆုံး !!